IQOO Neo3 enweelarị ụbọchị mbupute gọọmentị | Gam akporosis
IQOO Neo3 enweela ụbọchị mbido gọọmentị n'okpuru isiokwu nke ịgafe Animal
iQOO, sub-brand nke Vivo na-egwu egwu, ekwuputala ụbọchị mmalite nke ụlọ ọrụ mkpanaka na-esote arụmọrụ, nke ga-abata dịka iQOO Neo3.
Ọ bụ April 23 ụbọchị ahọpụtara nke anyị ga-anabata gị n'ụdị n'ahịa dị elu. Onye nrụpụta nke China enyebeghị nkọwa banyere njirimara na nkọwapụta teknụzụ nke ekwentị a na-eche ogologo oge, mana o kwuputala ihe e kwuru na ezigbo mma akwụkwọ mmado nke na-adabere na ịgafe anụmanụ, usoro ihe omimi nke ihe egwuregwu vidio si Nintendo.
Ọ bụ ihe ijuanya na ụlọ ọrụ na-ekpughe ọkwa gọọmentị na nke dị mkpa banyere otu n'ime ekwentị ndị na-esote ya dabere na isiokwu ụmụaka a. Otú ọ dị, ọ pụrụ ịbụ a pụtara irè ahịa azum ga-akpali agụụ mmekọahụ na mmasị na gamers nke aha nke Animal agafe, egwuregwu na, site n'ụzọ, na-ama nwere ya kasị nso-nso ntọhapụ, nke bụ Anyi na-agafe: New Horizons, nke amachibidoro na China, mgbe ọ gbasasịrị, n'ihi okwu mmechi ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'ihi ojiji onye ọrụ nyere aha ọhụrụ ahụ.
Have ga-echere ruo Eprel 23 iji mụta ihe niile gbasara njedebe a dị elu, ebe ọ bụ na enweghị ozi ọ bụla gbasara àgwà ya. Otú ọ dị, dabere na ekwentị mkpanaaka site na usoro gara aga nke ika ahụ, anyị nwere ike ịtụ anya iji nke Qualcomm Snapdragon 865, yana atụmatụ ndị ọzọ ejikere ọhụụ maka ndị gamer ọha.
N'ihi eziokwu ahụ bụ na chipset ahụ e kwuru n'elu ga-adị n'okpuru mkpuchi nke iQOO Neo3, njikọ 5G ga-adịkwa n'otu, yana Adreno 650 GPU maka mkpochapụ nke egwuregwu na eserese chọrọ. Anyị na-atụ anya na mmejuputa usoro sistemu dị jụụ na njirimara egwuregwu dị iche iche na-ebuli ahụmịhe onye ọrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » IQOO Neo3 enweela ụbọchị mbido gọọmentị n'okpuru isiokwu nke ịgafe Animal
LG Style3 ekpughere na Japan: Ekwentị etiti na Snapdragon 845
Sony Xperia 5 II nwere ike ịbụ obere ọkọlọtọ kacha nta na oge ndị a